StartupEngine: I-CMS enhle yokuqalisa ama-startups | Kusuka kuLinux
StartupEngine: I-CMS enhle yokuqalisa ama-startups
Umzuzu wokuqalisa uqale izolo, kepha kuze kube namuhla osomabhizinisi abaningi ngokwengeziwe balokotha ukudala izinto ezinhle ngesikhathi esifushane nangomthelela owandayo. Ukuqalisa ukuqala kungumsebenzi omnandi, onzima futhi kwesinye isikhathi onobungozi, amathuba okukhula nokuthi imodeli yebhizinisi lakho iyasabazeka ngokuyinhloko izisekelo zokuphumelela kwayo, kepha okuhambisana nayo ngamakhono akho amasha, ukumaketha futhi ngaphezu kwazo zonke iziteshi zakho ukumaketha.
Ngokwami, ngikholelwa ukuthi ukuqala okuzozibeka kahle emakethe ngaphandle kwesidingo semali enkulu yilawo basebenzise amandla abahlanganyeli babo ngokusebenzisa ubuchwepheshe obusha futhi isiteshi sabo sokukhangisa esivelele yi-Intanethi.
Kukho konke lokhu okungenhla, ngikujwayele ukusabalalisa lokho Amathuluzi womthombo ovulekile avumela ama-Startups ukuthi athuthukise, abe nobuchule obengeziwe, asebenze kahle futhi, ngaphezu kwakho konke, amboze izindawo ezithonya ngqo inhlalakahle yazo. IsiqaloEngine ngokwesibonelo, iyi-CMS enamandla futhi enhle evumela ama-startups ukwethula iwebhu ngesikhathi esifushane, ngisho nokuvumela lawo ma-startups angenawo amakhono adingekayo kwezobuchwepheshe ukuthi nawo abe khona kwi-intanethi ngendlela efanelekile.
1 Yini i-StartupEngine?
2 Izici ZokuqalisaEngine?
Kuyinto a umthombo ovulekile futhi onamandla ovulekile we-CMS kudalwe ngu Unogwaja onenhlanhla, ebhekiswe ngaku ukwakhiwa kwamakhasi ewebhu wokuqalisa egcina ukwakheka okusha, ngezifanekiso nemodeli yewebhu ebonakala ngokucacile kusakhiwo "esijwayelekile" esisetshenziswa ukuqala okuningi.
Nge-StartupEngine singakwazi dala amakhasi amahle okufika, agcwaliswa ngebhulogi ewusizo, amakhasi amadokhumenti noma izici umsebenzisi ngamunye angazakha. Ngokufanayo, ithuluzi lifakwe i- i-API elula kepha enamandla evumela okuqukethwe kwethu ukuthi kubukwe kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza noma izindawo.
IsiqaloEngine Inikeza ukusebenza okunamandla okusivumela ukuphatha abasebenzisi, izindima, ukumiswa, okuqukethwe, imisebenzi, ukwakhiwa phakathi kwabanye, futhi inokusetshenziswa okuthuthukile kokuhumusha okususelwa ku-git.
Idemo yohlelo lokusebenza ingabukwa lapha, futhi kugalari elandelayo singabona okunye kokusebenza kwayo:
Phakathi kwezici ezahlukahlukene ze-StartupEngine esingaziqokomisa:
Mahhala, umthombo ovulekile futhi omuhle.
Kulula ukuyifaka, ngokuhambisa okulula kweHeroku futhi okuqondakala kalula ngekhodi.
Ukuhlela nokubeka i-parameter kuwebhusayithi usebenzisa i-StartupEngine kulula kakhulu futhi akudingi lwazi lobuchwepheshe, ukusebenza kwayo kuyatholakala lapho kufakwa, ngakho-ke ukuhlela ukusebenza okusha kungakhethwa kuphela.
Ivumela ukwenziwa kwamakhasi okuqalisa okupheleliswe ngobuchwepheshe, kufaka phakathi ukwakhiwa kwamakhasi okufika, okuthunyelwe kwebhulogi kanye nemibhalo yamaphrojekthi wethu.
Ihlangana nezinhlelo zokusebenza zenkampani yangaphandle kanye nezinsizakalo ngenxa ye-API yayo enamandla.
Ivumela ukuphatha izindima nokufinyelela kuma-cms, abasebenzisi, ukulungiswa, okuqukethwe, ukusebenza, njll ..., konke kusuka ekuphathweni komugqa wokuqhafaza noma wokulawula okuthuthukile.
Ukusetshenziswa okuthuthukile kokulawulwa kwenguqulo.
Ifakwe idizayini esebenzisa iBoostrap 4 + Vue.js, engabuye igcwaliswe ngezifanekiso esingazenzela zona.
Ihlanganisa isihleli esithuthukile esizosivumela ukuthi senze ukuguqulwa kwezinhlobo ezahlukahlukene.
Ukuhlanganiswa nezinsizakalo zezibalo.
Ezinye izici eziningi.
Indlela elula yokuqala ukusebenzisa i-StartupEngine ukuthumela uhlelo ku-Heroku ngesinyathelo esikhonjiswe ku- githubNgendlela efanayo, ungayifaka kuseva yendawo ngokulandela izinyathelo ezibonakala lapho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » StartupEngine: I-CMS enhle yokuqalisa ama-startups
Umbuzo, wonke amaLatinos asebenzisa igama elithi "amahle" ukuchaza isoftware, awazi yini ukuthi yini embi?
Teresita silva kusho
"Emplais" ??? "Emplais" akulungile !!!
Ungathi "qasha" kusuka "ukuqasha"?
Umuntu wesibili ngobuningi (wena, wena) wethula okukhombisa "ukusebenzisa"?
Phendula uTeresita Silva
U-Avlis Atiseret kusho
"Akulungile" ?? Intshisekelo yakho yokulungisa labo abangafundile iyabazeka. Noma kunjalo…: /
Ayikho eminye imibuzo, Mnumzane.
Phendula u-Avlis Atiseret
Okuguquguqukayo 101: Ukwazi ikhompyutha yakho
Ukukhetha ulimi lwakho lokuqala lohlelo